RED Hydrogen One Titanium: taleefanka ugu horeeya ee xanta ah ee 2017 waa la bixiyaa - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »RED Hydrogen One Titanium: 2017 horay loo sii amar-geliyey taleefanada ugu dambeyntii waa la bixiyaa
RED Hydrogen One Titanium: casriga u horreeya ee xakamaynta ee 2017 ugu dambeyntii bixiyay
Lagu soo bandhigay 1595 Dollar, casriga ayaa qaatay boodhka waraaqo farsamo oo laba sano ka dib.
Sida la soo sheegay Numerama markaad ka baxdo smartphone, RED Hydogen One wuxuu ahaa mid aan ka fogeyn tijaabooyin la isku halleyn karo oo si fudud u ah in si fiican loogu isticmaalo lacagtaada. Waxay ahayd lix bilood ka hor iyo munaasabadda suuq-geynta suuq-geynta Standard-ka ee telefoonka, waxaa lagu bilaabay $ 1 295.
Nabbad la'aan tayo la'aan
Maanta, soo saaraha ku takhasusay kamaradaha-dhamaadka sare (oo ay ku jiraan 8K ah) ku dhisan ee commercializing hydrogen Kan Titanium ... in dollars 1 595. Iyada oo jirka titanium halka uu doonayo iyo xoog, ka qiimo ah - sidoo kale ka culus 29 garaam, laakiin in ku saabsan oo dhan. Isbedelka la ogaan karo oo kaliya ayaa ku jira kaydinta, iyada oo boos la keeno 256 Go halkii 128 Go.
Waxaa intaa dheer, hydrogen Mid ka mid ah RED ku eedeeyay dib u dhac muddo sanado ah: waxa uu muujinayaa laba xuduudaha ballaaran on sare iyo hoose ee shaashadda inch 5.7, ayaa Snapdragon GOS la 835 540 Adreno naqshadeynta chip oo a laba sawir oo sawir-qaade ah oo ka socda 12.3 MP. The module camera dheeraad ah, wax xuja nalka hore ee gaari RED, wuxuu ahaa awoodaan in ay ku darto in ay telefoonka la Xidhiidhiyayaasha on guddi danbe. Ugu dambeyntii ma noqon doonto wax, shirkadda ayaa meesha ka saartay wax kasta oo ku saabsan mawduucan ku yaal boggeeda sida uu tilmaamay dhowr toddobaad user a reddit.
Huawei P30 Pro ayaa u codeeyay sawirada ugu fiican ee abaalmarinta TIPA World
Samsung Galaxy S10 waxaa laga yaabaa in hoos loo dhigo noocyada 4
Ma jiri doonaan noocyada kala duwan ee 5 iPhone ee September 2019?
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/red-hydrogen-one-le-smartphone-precommande-en-2017-enfin-livre-312349
Ma waxaad ka hortagi doontaa WWF's Fortnite Challenge # NoBuildChallenge?